Kenya oo shaqada ka eriday 25,000 oo kalkaaliye caafimaad - Sabahionline.com
Kenya oo shaqada ka eriday 25,000 oo kalkaaliye caafimaad Maarso 09, 2012
Dawlada Kenya ayaa Khamiistii (-da March) waxay shaqada ka eriday 25,000 oo kalkaaliye oo toddobaadkii hore mudaaharaad sameeyey, go’aankaa oo dalka khatar u gelinaya in uu yaraado cadadka xirfadleyda caafimaad ee dalka, AFP ayaa werisay. Qodobbo la xiriira
Gobollada Kenya oo u dhaqaaqay cayrinta in kabadan 10,000 oo qof oo shaqaale magac u yeel ahaa
Kalkaaliyeyaasha ayaa 1-dii March billaabay in ay ka mudaaharadaan sida ay dawladdu ugu guul-darraysatay in ay fuliso kordhintii mushaharooyinka oo laysku raacay sannadkii hore. Xirfadlayaasha caafimaadka ayaa sameeyey shaqo ka fariisi bishii December si ay u codsadaan mushaar kordhin, sahay siin, iyo adeegyada oo loo kordhiyo cisbitaallada bulshada. Dalku “intaan ka badan ma sii fiirsan karo iyadoo ay dadka reer Kenya ku dhex rafaadayaan isbitaallada iyadoon ciduna daweynayn, sababtuna ay tahay kalkaaliyeyaashii iyo shaqaalihii kale ee caafimaad ayaa shaqo ka fariisi ku maqan,” ayuu yiri afhayeenka daawladda Afred Mutua. Wali ma cadda inta ay le’eg tahay iyo inta ay ka dhigantahay tirada laga rukhseeyey kalkaaliyeyaashii dalka, laakiin haddii shaqo ka eryiddani ay rumawdo oo la sii ambaqaado, dalkan reer Afrika habkiisa caafimaad aad bay tani saamayn ugu yeelan doontaa, ayay werisay AFP-du. Mutua wuxuu sheegay in dawladdu ay raadinayso in ay beddesho kalkaaliyeyaasha shaqada laga eryay, isagoo intaa ku daray 25,000 ee kalkaaliye mar horeba laga saaray liiska mushaar-siinta dawladdda. “Mar haddii la eryey kalkaaliyeyaashaa, waxaannu dadka u qalma ee caafimaadka yaqaan ugu baaqaynaa in ay araji u soo qortaan shaqooyinkaa si loo buuxiyo meeshaa maran,” ayuu yiri Mutua. Ma jeclaysatay maqaalkan?
March 10, 2012 @ 03:26:01AM
Arrintan waxay ka mid tahay indha sarracaadyadii dadka lagu siri jirey ee la dhihi jirey waxbaa la xallin. Ma aha in nolosha dadka lagu khamaaro. Ma jiraan wax farqiya oo u dhexeeya ruux Kenyan ah oy dilayaan ururka argagixisada ah ee Alshabab iyo kuwa u dhimanaya sababtoo ah kalkaaliyayaashii caafimaad baa shaqo-joojin ku jira sababtu waxay doonto ha ahaatee. Xukuumaddu waa inay si fiican u qaadataa dhabta ah in xaaqinka cusub laga yaabo inuu si fiican wax u xaaqo, laakiin ay ka fakan karto waxyaabo yar yar oo badan.